DF oo diiday in dib loo dhigo dacwada badda | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo diiday in dib loo dhigo dacwada badda
Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay war ka soo baxay dalka Kenya oo ku aaddan codsi ay u gudbiyeen maxakamadda caalamiga ah ee ICJ oo ay kaga dalbadeen in dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda ee u dhaxeeya Labada waddan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe oo shir Jaraa’id qabtay yaa sheegay in Kenya ay isku dayayso in mar afaraad la baajiyo dacwada lana muddeeyo markii shanaad.
Cismaan Dubbe wuxuu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay Maxakamadda Caalimga ah ee ICJ, ay saaka u qoratay waraaq ay ku caddayneyso in ay diyaar u tahay ka qeyb galka iyo soo xaadiridda xilligii ballanta ee 15-ka Maarso 2021, isla markaasna aysan Dowladda Soomaaliya marnaba aqbali doonin dib u dhigidid danbe.
Wasiir Dubbe, ayaa Kenya ku eedeeyay in aysan aqoon-saneyn Maxakamadda ama aysan ku kalsooneyn, tasina ay keyneyso dalab-yada badan ey ku dooneyso in mar waliba dib loo dhigo muddada dhageysiga dacwada.
Cismaan Dubbe oo u muuqday inuu qudbaddiisa kula rafanayo meelo badan aan kiiska xiriir la lahayn ayaa sheegay in Kenya ku andacootay in Soomaaliya aysan ka dhisneyn dowlad sharci ah oo midda hadda joogta uu waqtigeedii ka dhamaday.
“Arrinta dib u dhigista dacwada oo markii afaraad la rabo in dib loo dhigo oo aan saaka diidnay, haddii mar afaraad dib loo dhigo waxay dhabar jab ku tahay cadaaladda adduuna iyo sumacadda Maxakamadda”. ayuu yiri Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya.
“Waxaan dooneynaa Shacab, Siyaasiyiin, Xukuumad, Baarlamaan, iyo Dowlad Goboleed intaba in aan is kaashanno” ayuu hadalkiisa ku daray.
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaday ee Farmaajo ayaa Saddex jeer hore u ogolaaday in dib loo dhigo dhageysiga dacwada, wuxuu kala diray guddigii u xil saarnaa difaaca badda, isagoo kiiska oo dhan ku soo joobay RW ku xigeynka Mahdi Guuleed.
Warar 2 March 2021 17:43
Xisbiga uu hoggaamiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqday Xisbigii ugu horreeyay ee u diyaar garooba Bannaanabaxa looga soo horjeedo Farmaajo